CEEBEEY TACAAL: Real Madrid inay soo qabato Barcelona waxaa uga dhow inay hoos ugu dhacdo heerka 2-aad!!! – Gool FM
Mikel Arteta oo ku heesaya mid ka mid ah xiddigaha Arsenal, kaddib guushii ay xalay ka gaareen Olympiacos
(Spain) 15 Jan 2018. Waxay u muuqataa inay joogsatay beryihii wacnaa ee Real Madrid, Guushii ay Barcelona xalay ka gaartay Real Sociedad ayaa ka dhigan in Los Blancos ay u dhowdahay inay hoos ugu laabato heerka labaad ee horyaalka Spain halkii ay soo qaban lahayd hogaamiyayaasha.
Natiijadii xalay ee Barcelona ayaa dhalisay in Real Madrid ay hogaanka u jirsato 19-dhibcood inkastuu kulan u harsan yahay, halka ay 16-dhibcood oo qura ay jirto kaalinta 18-aad ee ah booska hoos loogu dhacayo heerka labaad.
Suuro gal uma muuqato in Real Madrid ay iminka ku tartami karto horyaalka La Liga taa badelkeedana waa inay xooga saartaa sidii ay uga mid noqon lahayd afarta sare.
Waxaa laga adkaaday 4-kulan halka ay bar baro galeen shan kulan, waxayna 7-guul ka yar yihiin hogaamiyayaasha Barcelona.
Waxaa had iyo jeer la sheegaa in Real Madrid ay baxar tahay isla markaana aan marna lag saari karin tartanka, laakiin wax waaqici ah ma ahan inay difaacan karto horyaalka xilli ay xitaa dhibco badan ka sarreeyaan Atletico Madrid iyo Valencia oo ku jira labaad iyo saddexaad.
Xaqiiqda jirta iminka ayaa ah in dagalkeeda uu yahay Sevilla iyo Villarreal si ay u xaqiiqsato booskeeda Champions League ee xilli ciyaareedka soo socda 2018/19.
Villarreal ayaa u soo jirta hal dhibic oo qura halka Sevilla ay iyana saddex dhibcood uun u jirto.
Jeenyo oo qandaraasyo ka saxiixatay dhowr ciyaaryahan uu qeyb ka yahay Agoogo